Semalt: 10 Izixhobo zoLwazi lweeFree Simahla Ukuqalisa ukusebenzisa namhlanje
Ukukhangela i-website yindlela eqondileyo eqeshwe ngamaqela ahlukeneyo kunye neenkampani ezinkulu abafuna ukuqokelela imiqulu yedatha malunga nesihloko esithile okanye isihloko. Ukufunda i-mechanics yeenkqubo ze-web scraping kunzima njengoko idatha ivunwa kwiindawo ezihlukeneyo ngeefowuni zeefowuni, iindlela zenkambiso, i-HTTP kunye neempendulo ze-python.
Lapha sizinike uluhlu lwezona zixhobo eziphezulu ezidumileyo zewebhu zokukhangela i-intanethi.
1. I-Scraper (isandiso se-Chrome):
I-scraper iyayaziwa kakhulu ngobuchwephesha bayo bobuchwepheshe kwaye inkulu kubo bobabini abaprogram nabangabinkqubo. Esi sixhobo sinesidasethi yaso kwaye sikwenza kube lula kuwe ukuba ufikelele kumaphepha ewebhu ahlukeneyo uze ubathumele kwi-CSV. Amakhulu ukuya kumawaka amawebhusayithi angacatshulwa ngaphandle kwesi sixhobo, kwaye akudingeki ukuba ubhale nayiphi na ikhowudi, ukwakha i-APIs 1000 kwaye wenze ezinye izinto ezinzima njenge-Import.io uza kwenza konke. Esi sixhobo sikhulu se-Mac OS X, i-Linux, kunye ne-Windows kwaye sinceda ukukhuphela nokukhipha idatha kunye nokuvumelanisa iifayile kwi-intanethi.
I-Web-Harvest isinika izixhobo ezininzi zokucima idatha. Inceda ukukhawuleza nokukhuphela imithwalo yedata kwaye ngumhleli weskrini. Oku kuya kukhipha idatha yenkcazelo yangempela, kwaye ungayithumela njengeJSON, CSV okanye ugcine kwiGoogle Drive kunye neBhokisi.net.
Isicwangciso esinye isistim esisekelwe kwisiphequluli esinika ufikelelo olulula kwi-data ehleliweyo nehleliweyo kunye nedatha yenkcazelo yangempela kunye netekisi yokukhawulela idatha. Le nkqubo inokukrazula inani elikhulu leenkcukacha kwimithombo eyahlukeneyo kwi-APIL enye kwaye uyisindisa kwiifomathi ezifana ne-RSS, i-JSON ne-XML.
Umfaki-mafutha yinkqubo esekelwe kwifu ekunceda ukukhipha idatha ngaphandle kokuphuma..Kuya kusebenzisa umqhubi we-proxy owaziwa ngokuba yi-Crawler ogqithisa i-counter-measures kwi-crawler nge-website ekhuselweyo ye-bot. Umfaki-mafutha unokuguqulela i-website yonke kwi-data ehleliweyo, kwaye i-premium version iya kukuhlawula i-$ 25 ngenyanga kunye nabakhweli abane abahlukeneyo.
Ukuphazamiseka kuyithuluzi ekhutshweyo yokukhutshwa kwedatha encedisayo ekukhupha idatha kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye iziphumo zilandelwa ngexesha langempela. Oku kuya kuthumela idatha yakho kwiifom ezahlukeneyo ezifana ne-XML, JSON, CSV, kunye ne-SQL.
6. Ibha yamathuluzi eDatha:
Ibar yomnatha wedatha yongezelelweyo ye-Firefox eyenza ukukhangela kwewebhu ngeenkcukacha zayo ezininzi zokukhutshwa kwedatha. Esi sixhobo siza kuphequlula ngokukhawuleza amaphepha kwaye siwacokise kwiifomathi ezahlukeneyo zokusebenzisa kwakho.
Irobotsoft yaziwa ngenxa yepropati yayo yokukhutshwa kwedatha kwaye ilenza uphando lwakho lwe-intanethi lulula. Oku kuza kuthumela idatha yakho ekhishwe kwiipredishithi zeGoogle. Irobotsoft ngokwenene i-freeware enokungenelwa ngabaqalayo nabaqulunqi beengcali. Ukuba ufuna ukukopisha nokunamathisela idatha kwiibhodi ze-clipbo, kufuneka usebenzise le sixhobo.
Yinto enamandla kwaye iguquguqukayo ye-web scraping tool. Ikwazi ukulula ngokulula ukuba iyiphi idatha eyiluncedo kuwe nakwi shishini lakho kwaye akukho nto. Inceda ukukhupha nokukhuphela inani elikhulu leedatha kwaye lilungile kumaziko afana ne-PayPal.
9. I-Google Web Scraper:
NgeGoogle Web Scraper, kunokwenzeka ukuba ulandele yonke idatha kwiwebhusayithi yezobuntu, zokungenisa iindaba. Unokuzigcina zigcinwe kwifomethi yeJSON. Ngaphandle kwesiqhelo esivamile, esi sixhobo sinika ukhuselo olunamandla lwe-spam kwaye lususa yonke i-malware kunye nogaxekile kumashini wakho rhoqo.